आइतबार रातिसम्म भारी वर्षा हुने, शनिबार कहाँँ कति वर्षा ? - Naya Patrika
आइतबार रातिसम्म भारी वर्षा हुने, शनिबार कहाँँ कति वर्षा ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार रातिसम्म तराई क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । आइतबार मध्य तराई र पश्चिम तराईमा भारी वर्षा हुन सक्ने मौसमविद् सुजन सुवेदीले बताए ।
सोमबार बेलुकादेखि मौसममा सुधार आउने महाशाखाको अनुमान छ । बंगालको खाडीबाट ठूलो मात्रामा जलवाष्प आइरहेकाले भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले वर्षा गराउने न्यूनचापीय रेखा चुरे क्षेत्रको आसपासमा बसेकाले तराईमा वर्षा हुने देखिएको सुवेदीले बताए ।
हेर्नुस् शनिबार कहाँँ कति पानी पर्यो ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाको शनिबार ६ बजेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै सिमरामा २ सय १७ दशमलव २ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । सिमरामा भएको वर्षा तराई क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै हो ।
नेपालगन्जमा १ सय ६९ दशमलव ३ मिलिमिटर, दाङमा १ सय ६७ दशमलव ४ मिलिमिटर, जनकपुरमा १ सय ३७ दशमलव ६ मिलिमिटर, भैरहवामा ३९ दशमलव ६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
त्यसैगरी, काठमाडौंमा ३० दशमलव ८ मिलिमिटर मात्र वर्षा भएको छ । विराटनगर स्टेसनमा पानी पस्दा बिग्रिएर मौसमको जानकारी पाउन गाह्रो भएको मौसमविद् सुवेदीले बताए ।
उच्च सतर्कता अपनाउन गृहको अपिल
तराईका विभिन्न खोला र नदीमा पानीको बहाव उच्च भएकाले सबैलाई उच्च सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयलले अपिल गरेको छ । गृह मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी खोज, उद्धार र राहतका लागि स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीसहित जनशक्ति उच्च प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिएको जनाएको छ ।